Degmada Donod iyo Biyo-Xidheenadii Oo Buuuxsamay - Cakaara News
Degmada Donod iyo Biyo-Xidheenadii Oo Buuuxsamay
Danood (cakaaranews)Khamiis 4ta May 2017. Si looga gaashaanto roobyaraanta ay keento isbadalka cimilada aduunku ayaa waxay xukuumada DDSI dadaal badan kubixisay islamarkaana ay qorshayaal u qaadatay dhanka biyaha maadaama oo ay biyuhu yihiin adeegyada ugu muhiimsan bulshada deegaanka. Waxaana dhamaan dagmooyinka deegaanka lagasameeyay biyo xidhoono yarayar iyo kuwo waaywaayn. Iyada oo degmada donod ee gobolka doolo oo kamid ahayd goobihii ay abaartu saamay ay sifiican ubuuxsameen biyoxidheenkii degmada iyo braagihii waawaynaa ee laga dhisay degmadaasi.
Hadaba, mas’uuliyiin isugujirta heerdeegaan, heergobol iyo heer degmo oo kormeer indhoindhayn ah kuwasoo ay kamid ahaayeen maareeyaha kuliyada macalimiinta ee Dr Cabdimajiid xuseen mudane kifaax cabdulaahi macalin, gudoomiye kuxigeenka gobolka doolo mudane malow ibraahim iyo waliba kusimaha gudoomiyaha degmada donod ahna hogaanka nabadgalyada degmada donod mudane xasan shekh maxamed oo sheegay in allaha raxmaanki ihi uu kumanaystay degmada donod roobab khayrqaba oo sifiican ubuuxiyay biyo xidhenkii waynaa ee xukuumada DDSI kahirgalisay degmada donod iyo waliba dhamaan baraagihii iyo baliyadii ay dhistay degmadu. Waxayna masuuliyuuntu xuseen in sidookale xukuumada DDSI ay ceeldheer oo riig ah kaqoday degmada islamarkaana loogu talagalay in uu bulshaa adeeg biyo oo nadiif ah uu siiyo. Waxayna kula dardaarmeen bulshada degmada in ay sifiican uga faaiidaystaan biyahan.
Ugudanbayna, qaarkamid ah bulshada dagmada donod ayaa sheegay in ilaahay kumahadinayaan nimcadan roobabka ah uusiiiyay, waxayna tilmaameen in sidookale mahadcelin balaadhn usoojeedinayaan xukuumada DDSI ee uguhoreeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar. Kaasoo hirgaliyay balamihii uu kaqaaday bulshada degmada donod.